हाम्राेखबर सोमबार, जेष्ठ १७ २०७८
हरेक दिन राउन्डमा उहाँ मलाई लौन मेरी श्रीमतीलाई पनि यहीं आइसियुमा सार्न बेड मिलाइदिनोस् न भन्नुहुन्थ्यो ।
काठमाडाैं । कोभिड कालमा सबैभन्दा नजिकबाट कोभिडलाई नियाल्ने भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । आफ्नै आखाँ अगाडी कैयौंकाो मृत्यु देखेका, कैयौंको पिडा बुझेर पनि चुप बस्नु परेको तितो अनुभव चिकित्सक डाक्टरहरुसँग छ । सँगै कोरोना संक्रमित भएर आएका श्रीमान् मर्दा श्रीमतिलाई धन्न तपाई बाच्नु भयो खुसी हुनुस् भन्नु पर्दा निरिह बनेका डाक्टरहरुसँग थुप्रै अनुभव होलान् । यस्तै एक अनुभव ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत डा. अनुप सुवेदीले सामाजिक सन्जालमा सेयर गरेका छन् । पढौं उहाँका शब्द ।
१. हजुरबालाई अर्को अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा रहेकी श्रीमतीको चिन्ता छ । वास्तवमा हजुरआमा बितिसक्नुभएको उहाँलाई सुनाइएको छैन परिवारसँगको सल्लाहमा । अझै निकै अक्सिजन चाहिने हजुरबा सधैं मलाई डिस्चार्ज गरिदिनू न डा। साब भन्नुहुन्छ ।
४. ५–६ दिनअघि डिस्चार्ज भएर जानुभएकी आमा ओपिडीमा फलोअपमा । रातभरि सुत्नुहुन्न भनेर छोरीले भन्छिन् । अरू लक्षण छैनन् । जाँच्दा सबै राम्रै छ । म उल्लू ‘आमा, अझै रोगदेखि डराइरहनुभएको छ कि रु अब त डराउनुपर्दैन, अब बाँचियो है’ भन्छु ।
५. दाइ उमेरका उहाँ । खासमा झन् सिकिस्त उहाँकी श्रीमतीलाई पनि हाम्रै इमर्जेन्सीमा ल्याइएको रहेछ । तर आइसियुमा बेड नभएकाले भाउजूलाई चाहिँ अर्को अस्पतालमा रेफर गरिएको रहेछ । हरेक दिन राउन्डमा उहाँ मलाई लौन मेरी श्रीमतीलाई पनि यहीं आइसियुमा सार्न बेड मिलाइदिनोस् न भन्नुहुन्थ्यो । अन्यत्र बेडै नपाएका अरू सिकिस्त बिरामी पनि धेरै आइरहेका छन्, तिनलाई आइसियुमा प्राथमिकता दिनु परिहाल्छ, उता पनि तपाईंकी श्रीमतीको उपचार गर्ने राम्रो टिम होला, चिन्ता नलिनुहोस् भन्थें । निको भएर डिस्चार्ज हुने दिन दाइले भर्खर भाउजूको मृत्युको खबर पाउनुभएको रहेछ । रुँदै भन्नुभो– डा। साब, तपाईंले उसलाई यहाँ आइसियुमा सारिदिनुभएको भए ऊ पक्कै बाँच्थी ।